Tag: Ad nghọta | Martech Zone
Tag: Ad nghọta
Ahịa mgbasa ozi ọ na-arụ ọrụ? Lab42 jụrụ ya nke ahụ ma tinye akwụkwọ ozi a na nsonaazụ ya. Anyị kpebiri ilele etu ndị ahịa si ele nkwupụta mgbasa ozi na echiche ha gosipụtara ihe na-atọ ụtọ. Naanị 3% ga-akọwa azịza na mgbasa ozi dị ka nke ziri ezi, na naanị 21% ga-akọwa mgbasa ozi dị ka ihe ziri ezi. Anyị chọpụtara kpọmkwem akụkụ nke mgbasa ozi ha na-ekwenyeghi - ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha niile rụtụrụ aka na Photoshop dịka mmewere nke mgbasa ozi